Ndebiri maka Blogger - Geofumadas
Ọktoba, 2008 Internet na Blogs
Taa achọrọ m inyefe ọkwa a maka ịkwalite ọrụ a malitere na Septemba 30, ebe ezigbo enyi na-amalite blọọgụ, onye otu netwọkụ. Blog akụkọ akpọ www.prelates-blogger.com, ihe nlere nke ihe ndeputa blog nke edoziri na Blogger, ikpo okwu nke Google.
Site na oru a, ndị niile nwere blogger na Blogger ga - enwe ọ enjoyụ nchịkọta nke ndebiri nde abụọ (ha na - atụ anya iru 200 tupu ngwụsị afọ) n'efu na nbudata na iji na blọọgụ.
Ihe okike obula a haziri n’elu ikpo okwu anyi nwere:
Nseta ihuenyo ka ihuchalu imewe
A njikọ na ngosi online
Njikọ ya na nzere mbụ (onye edemede, onye mmebe)
Njikọ iji budata nhazi ahụ. Nọmalị atụmatụ ndị a na-abịa na faịlụ .zip nwere faịlụ XML nwere ya na atụmatụ na nkuzi iji tinye ya na blọọgụ.
N'ụzọ dị otú a, ha bu n’obi imepụta ebe nzukọ pụrụ iche ebe ndị na-ede blọgụ nwere ike ịchọ ihe ha chọrọ maka weblog ha na ndị na-ese ndebiri nwere ike ịkwalite ọrụ nke ha n’efu. Ọ bụrụ na ị bụ onye nrụpụta ndebiri ma chọọ ịkwalite ọrụ gị na ndebiri-blogger, ị nwere ike iji ụdị a ka ha na ha bido.
Templates-blogger bụ ihe izizi nke nnwale nke Actualidad Blog na-aga ịmalite iji mepụta usoro nke usoro ịntanetị n'ịntanetị karịsịa maka obodo Blogger, yabụ ị ga-akpachara anya.
Ehee, ha nwekwara Nri ị ga - esi na ya pụta
Previous Post«Previous Bubata site na map shp na Microstation
Next Post Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile dị njikere maka 4as Jornadas gvSIGNext »